Nezvedu - XGEAR
Isu tinovavarira kuve innovator uye iyo zvemitambo uye zvekunze giya repamusoro brand.
Kunyanya kubatikana kugadzirira kurarama, asi usingararame?Enda mberi zvino!
Mitambo uye midziyo yekusimba, mhando yemitambo yemvura, yemukati nekunze giya, XGEAR inongori nezve zvese zvaungashuvira.
Kutarisa pane chiitiko chese uye kushinga kupaza, XGEAR inogara yakagadzirira kuongorora zvisingazivikanwe uye kugamuchira zvinonetsa.Isu tinogadzira, kugadzira, kugadzira uye kushambadza mitambo mitsva uye ine hunyanzvi uye magiya ekunze, uye tinozvipira kusimudzira hupenyu hwakanaka uye hune tariro.
Pese paunozviwana wava kudivi reruzhinji, inguva yekumbomira wofungisisa.Enda unotsvaga giya rakakodzera muXGEAR, uye vhura nyika yako kune zvitsva zvingangoitika.
Iyo XGEAR imhando iri kukurumidza kukura, isu tinoshandira nzira dzese dzevatengi dzinosanganisira kutenga kweboka renharaunda, social media influencer, mutungamiriri wepfungwa, E-commerce, retail, OEM, kugovera uye mutengesi.Zvigadzirwa zvedu zvasvika kuAmerica, Europe, Japan, Australia nepasirese.Iva pamwe nesu, uye isu tinogona kubatsira bhizinesi rako kukura.
Nzvimbo mbiri dzekuchengetera zvinhu muUnited States, imwe iri Los Angeles, uye imwe iri kuWisconsin, inochengetedzwa zvisina mhosva inopa nzvimbo yekuchengetera uye kugadzirisa zvigadziriso, saka zvese zviri zviviri ngarava yakananga kupinza uye ngarava yemukati ngarava inowanikwa, iyo inopa shanduko kune vatengi vedu.
Zvikwata zvinobudirira zvinopa mapakeji emitengo yemakwikwi, anosanganisira yakakura zvigadzirwa zvemhando, kugovera ruzivo rwekushambadzira, ratidziro uye tsigiro yekuongorora, dhizaini yechigadzirwa nekusimudzira, tsananguro yechigadzirwa chemhando, tsigiro yekurongedza, rutsigiro rwekutengesa, timu yebasa revatengi, chengetedzo, kurongedza uye kugadzirisa mhinduro, yakatsaurirwa. timu yekutumira yakavakirwa kuti ive nekukurumidza kutendeuka munguva yekupindura kune ese matambudziko nemikana.
Yakashongedzerwa neOracle NetSuite system, ECCANG ERP uye ine chibvumirano neSPS commerce.Masisitimu edu epamberi uye maitiro akashandisa yazvino tekinoroji uye manejimendi uye ziva mafambiro ezvigadzirwa zvako nekukurumidza uye zvine mutengo.